tra-tehaka nihady volamena tsy nahazoan-dalana, raha ny fampitam-baovao manokan’ny mpitandro filaminana ao Betioky. Tsiahivina fa teratany sinoa miisa 9 no indray voasambotry ny polisy ao amin’ny Service Regional de Renseignement, de Contrôle de l’Immigration et Emmigration (SRRCIE) Toliara tany amin’ny kaominina Lazarivo, disitrikan’i Betioky Atsimo tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Nanao fisafoana tany amin’ny kaominina Lazarivo ny polisy no nahita teratany Sinoa mampiasa mpiasa gasy mitrandraka volamena. Nanatona teny avy hatrany ny mpitandro filaminana saika hanamarina ireo antontan-taratasy mahakasika io fitrandrahana volamena io. Tsy nisy taratasy velively milaza fa afaka mitrandraka volamena ilay sinoa ka nentina natao fanadihadiana tany amin’ny paositry ny polisy. Tamin’izany no nahalalana fa manao fitrandrahana an-tsokosoko io sinoa io ary rehefa nandeha ny famotorana dia sivy no indray voasambotra. Fantatra ihany koa fa fahazoan-dalana hizaha tany na « visa touristique » no ananan‘izy ireto kanefa zavatra hafa no ataony eto Madagasiakara.